Graphite Electrode Vagadziri & Vatengesi | China Graphite Electrode Fekitori
EDM Electrode / Graphite Mould
EDM ine zvakanakira yakakwira machining kururamisa, yakakwira yepamusoro mhando uye yakafara machining renji, kunyanya muforoma mhango machining yezvakaomarara, chaiyo, yakatetepa-yakakomberedzwa, yakatetepa yakatsemuka uye yakasimba zvinhu, izvo zvine zvakwakanakira kupfuura kukwirisa-kumhanya, saka EDM icharamba iri iyo huru nzira yeforoma mhango machining.
Spectral yakachena graphite electrode tsvimbo
Spectral yakachena graphite electrode ine yakakwira kabhoni zvemukati, yakanyanya tembiricha kuramba, yakanaka kuitisa pane yakanyanya tembiricha Tine akasiyana nokurondedzerwa uye hukuru, anogona kuita customized kugadzirwa maererano dzenyu zvinodiwa.
Graphite anode ndiro ye electrolysis
Muchikamu chemagetsi, iyo electrode inoyerera ichienda mu electrolyte inonzi graphite anode plate. Mune indasitiri yemagetsi, iyo anode inowanzo gadzirwa kuita chimiro cheplate, saka inonzi graphite anode ndiro. Inoshandiswa zvakanyanya mu electroplating, kurapwa kwemvura yakasviba, maindasitiri anodzivirira ngura kana seakakosha zvinhu. Graphite anode ndiro ine hunhu hwekupisa tembiricha, yakanaka conductivity uye yekupisa kuitisa, nyore machining, yakanaka kemikari kugadzikana, asidhi uye alkali ngura kuramba uye yakaderera madota zvemukati. Inogona kushandiswa kumagetsi emagetsi, kugadzira chlorine, caustic soda, uye kugadzira alkali kubva ku electrolyzing salt solution. Semuyenzaniso, graphite anode ndiro inogona kushandiswa seye conductive anode yekugadzira caustic soda kubva ku electrolyzing munyu mhinduro.
Kubuda girafu graphite bhora
Graphite haina nzvimbo yekunyunguduka. Iyo ine yakanaka conductivity, yakanakisa yekupisa yekuvhunduka kusagadzikana, uye inogona kushandiswa kune yakagadzikana EDM. Graphite ine yakanakisa machinability. Zvichienzaniswa nesimbi, inogona kugadziridzwa kuita electrode munguva pfupi, ingori 1/3 kusvika 1/10 nguva ichienzaniswa nesimbi.
Nyowani nyowani indasitiri
Iko kushandiswa kwe graphite tekinoroji inzvimbo yakakosha musimba nyowani, kunyanya mumaindasitiri ane hukama nemotokari.
Magetsi kuburitsa machining (EDM) ndiyo mhedzisiro yemagetsi spark corrosion panguva yekudonha kubuda pakati pemagetsi. Chikonzero chikuru chemoto wemagetsi ngura ndechekuti huwandu hwakawanda hwekupisa hunogadzirwa mumoto wepasipe panguva yekubuda kwesaraki, izvo zvinopisa zvakakwana kuita kuti simbi iri pamusoro pemagetsi inyungudike zvishoma kana kutopisa uye kuita mhute kuti ibviswe.
Graphite tsvimbo nemhangura tsvimbo
Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa sekabhoni arc electrode musimbi yekutengesa michina. Iyo kabhoni arc mweya yekugura tsvimbo ine zvakwakanakira zvepamusoro kunyatsoshanda, yakaderera ruzha uye yakafara kushandiswa. Inoshandiswa zvakanyanya mukukanda, kubhaira, kuvaka chikepe, indasitiri yemakemikari nemamwe maindasitiri kukwenya kabhoni yakadzika, simbi yakakandwa, simbi isina chinhu, mhangura uye zvimwe simbi.